Basola isibhedlela ngobudedengu - Ilanga News
Home Izindaba Basola isibhedlela ngobudedengu
Basola isibhedlela ngobudedengu
Ukufakwa kwegama lomzali oyedwa ezinganeni ezizalwe ngosuku olulodwa kubadalele inkinga
KAWUSABUTHI quthu ubuthongo umndeni wakwaHlongwane Kwa-CC, eMlazi, kulandela ubudedengu abathi benziwe yisibhedlela iPrince Mshiyeni, ngokufaka amagama omzali oyedwa ezinganeni ezimbili ezizalwe ngosuku olulodwa. Lesi senzo bathi yiso esiholele ekutheni imindeni emibili ingazi ukuthi kumele yenzenjani ngemuva kokuba sona lesi sibhedlela, siphinde sabatshela ukuthi lezi zingane ebese zithathwe yisibhedlela emindenini ngoba kusalindwe imiphumela yolibofuzo, enye yazo igcine ishonile. Ngokuthola kweLANGA, indodakazi kaNkz Phumzile Hlongwane eneminyaka ewu-17, iye kulesi sibhedlela iyobeletha ngomhla ka-6 kwephezulu.
Uthi idedelwe nomzukulu wakhe ngomhla ka-9 kuwuMsombuluko. Uthi kungene ucingo kuyona indodakazi yakhe ngoLwesine lwangomhla ka-12. “Ukhulume nocingo ngambona eshintsha ebusweni, maqede walunika mina. Kube sekukhuluma othe ungu-matron, wacela ukuthi
unina wengane afike nengane esibhedlela ngoLwesihlanu,” kusho ugogo wengane. Uthi akacabanganga okuningi ngalokho, ezitshela ukuthi mhlawumbe kukhona abayokubheka kunina wengane, wayobagibelisa ekuseni wabuyela ekhaya.
Ngabo 10 ekuseni uthi kube sekungena ucingo luthi makalunge ngokushesha kunemoto ethunyelwe yisibhedlela ezomlanda. “Ngithukile uma ngifika ewodini labatetayo indodakazi yami isigqokiswe i-gown, umzukulu wami esekhunyulwe izimpahla zakhe zafakwa kuplastic. Kangibuzanga lutho ngoba bengisadidekile, sabe sesiyiswa ehhovisi lika-matron. “Basitshele ukuthi kunengane esesibhedlela enegama lendodakazi yami esihlakaleni nasonyaweni, kanti nengane esaphuma nayo ibinegama lendodakazi yami esihlakaleni nasonyaweni,”
kulanda uNkz Hlongwane.
Uqhuba athi ube esetshelwa ukuthi izingane zombili kudingeka zisale esibhedlela ukuze kwenziwe ulibofuzo kuzona, kutholakale ukuthi iyiphi okungeyabo. Uthi lokhu kuqale kwamxaka ngoba isibhedlela bese sivele siyiphucile indodakazi yakhe ingane ngaphandle kwemvume yakhe. “Sibe sesitshelwa ukuthi sizobizwa nalona omunye umndeni kuyokwenziwa ulibofuzo ezinganeni,” esho. Ngempela kuyiwe emasontweni amabili edlule nokuyilapho ethi bafike batshelwa ukuthi kuzothatha izinsuku eziwu-15 ukubuya kwemiphumela. “NgoLwesine lwangomhla ka-26, kube sekungena ucingo luthi masilunge, sizolandwa yimoto yesibhedlela siyadingeka ngokushesha.
Ngibuze ukuthi sesizolanda ingane yini ngoba bengenzela ukuthi siphathe izimpahla, bathi cha. Uma sesisemotweni, bekukhona nalo omunye unina wengane ephethe nezimpahla zengane.” Uthi uma sebefika esibhedlela batshelwe ukuthi enye yezingane isishonile nathi bathe uma bebuza ukuthi kwenzakaleni, udokotela obekhona wabatshela ukuthi zaqala ukugula ngoMgqibelo odlule izingane zikhishwa yizisu. “Udokotela uthe izingane zagula kanye kanye zakhishwa yizisu, enye yangena egunjini labagula kakhulu yaphuma kwangena enye.
Ibe isishona enye ingane lena eyayisale esibhedlela ngesikhathi indodakazi yami igoduke ‘nomzukulu’,” kusho yena. Uthi bathole ukuthi lena enye ingane yayizalwe yayofakwa emalambini ngoba yayizalwe ine-jaundice. Uthi iyona futhi le ngane abathole ukuthi ishonile kwasala le ababegoduke nayo. Lo mndeni uthi kubonakala kunobudedengu obukhulu ngoba ingane esibhedlela ibizwa ngegama likanina nabathi kabaphenduleki ukuthi kungani kuthathe izinsuku eziningi kangaka ukuze kubonakale ukuthi kunezingane ezimbili ezibiza umama oyedwa.
“Noma indodakazi yami isiphumile, kwenzeke kanjani ukuthi bangaliboni lelo phutha,” esho.
Elinye ilungu lomndeni wakwa-Hlongwane likhale ngokuthi kungani isibhedlela singayazisanga imindeni ngesikhathi izingane zigula, zingena ziphuma egunjini labagula kakhulu. Okunye abathi kukhombisa ukungabi nazwelo okwenziwe yisibhedlela, wukungaxhumanisi omama laba abasebancane kwabona nosonhlalakahle noma odokotela bengqondo ukuze babaluleke ngokuthathwa kwezingane. “Eyami nje ingane ngiyayibona ukuthi le nto iyayihlukumeza kodwa manje kasazi ukuthi sizoyiduduza sithini. Sekukubi kakhulu manje njengoba olunye usana kuthiwa selushonile ngoba isithuke kakhulu ngemiphumela ukuthi izothini,” kusho uNkz Hlongwane.
Lo mndeni uthi indlela lolu daba olusingethwe ngayo yilesi sibhedlela, kwenza ube nokusaba ngoba kasikhombisi ukuthi siyazwelana nemindeni ngaleli phutha elenziwe ngoba bebengafuni nokuthi ukwazi ukuxhumana nalona omunye umndeni. “Ngisho omama bezingane bebengavumi baxoxe, nokusenza singasiqondi isizathu salokho. Ngiyafisa ukuthi kube wuMnyango wezeMpilo osiphathela lolu daba ukuze sisizakale njengomndeni,” kusho elinye ilungu lomndeni wakwaHlongwane. ILANGA lixhumene nomndeni wesibili wakhombisa ukungathandi ukukhuluma ngalolu daba. Okhulumela uMnyango weze Mpilo KwaZulu-Natal, uMnu Ntokozo Maphisa uthi bakhathazekile ngalolu daba, futhi bayadabuka ngokudlula emhlabeni komunye wabantwana -nokuyinto engahlobene neze nezinsolo zokuphambana kwamagama. nonhlakaniphos@ilanganews.co.za
Previous articleUkuthengwa kombhede kukhiphe izidumbu
Next article02 JUNE 2022